We.com.mm - အိမ်ထောင်ပြုဖို့ဆို ဝေးဝေးကရှောင်ရမယ့် မိန်းမအမျိုးအစားများ
အိမ်ထောင်ပြုဖို့ဆို ဝေးဝေးကရှောင်ရမယ့် မိန်းမအမျိုးအစားများ
အမယ် … writer က ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ဝေးဝေးရှောင်ရမယ့်မိန်းမတွေဘာတွေလုပ်လို့၊ လောက မှာ ယောကျာ်းနဲ့မိန်းမဆိုပြီးနှစ်မျိုးပဲရှိတယ် ဘာညာနဲ့ပြောမယ့် လူတွေကိုကြိုကန်ထားတာပါ။ တိရစ္ဆာန်လေးတွေတောင် မွေးလာကတည်းက လူကြောက်တာ၊ လူယဉ်တာ၊ ဟင်းခိုးစားတာ၊ တွေ့ကရာနေရာ ချီးပါသေးပေါက်လုပ်တတ်တာ စသဖြင့်အကျင့်လေးတွေပါလာကြတာပဲ။
လူဆိုဘယ်ပြောကောင်းမလဲ။ ပခုံးနှစ်ဖက်ကြားကခေါင်းပေါက်ပြီး ဦးနှောက်တစ်လုံး၊ နှလုံးသားတစ်ခု နဲ့အသက်ရှင်ရတာချင်းအတူတူ၊ အတွေးအခေါ်နဲ့ ခံယူချက်တွေတော့ကွာသွားတယ်။
ဒါဆိုမင်းက ဘယ်လို research တွေလုပ်သလဲ ? မမေးပါနဲ့။ Research ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကြီးက အရမ်းမြင့်လွန်းတယ်။ လူတစ်ယောက်ဘာဆိုတာ ပါးစပ်ကထုတ်ပြောမှသိတာမဟုတ်ပါဘူး။ အပြုအမူ၊ အပြောအဆို၊ အနေအထိုင် နဲ့လည်းဒီလူဘာဆိုတာ ခန့်မှန်းနိုင်တယ်။ အဲဒါကိုယ်မြင်လို့၊ တွေ့ဖူးလို့ နောက်ပြီး စာအုပ်တွေဖတ်ဖူး လို့သိတဲ့အကြောင်းအရာတွေ။
မိန်းမ ( ၃ ) မျိုးရှိတယ်။ ကိုယ်သိသလောက်ပေါ့ …။
( ၁ ) အလိုကြီးတဲ့မိန်းမ
အလိုကြီးတယ်ဆိုတာ ဘာလဲလို့မေးလာရင် အလွယ်ဆုံးပြောရမှာကတော့ လောဘကြီးလွန်းတာ၊ အလိုရမ္မက်တွေများလွန်းတာ၊ ရယူလိုမှုတွေအတောမသတ်နိုင်တာလို့ပြောရအောင်လား။ ဘယ်လိုအရာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ညီတူမျှတူရမယ်ဆိုရင်တောင် ငါကနည်းနည်းလေးပိုပြီးယူလိုက်ရမှ ဆိုတဲ့သူမျိုး။ ယောကျာ်းရှိမိန်းမဖြစ်ရင်လည်း မယားဝတ္တရားကျေပြွန်တာ၊ မကျေပြွန်တာတွေထားလို့ ရှိသမျှလစာအကုန်အပ်၊ တစ်နေကုန်ရသမျှ အကုန်ပေး၊ နင်ရသမျှငါအကုန်သိမ်းတယ် ဆိုသလို။ တစ်သိန်းပေးရင် “ အော် .. သူက တစ်သိန်းတောင်ပေးတယ် “ ဆိုတာထက် “ တစ်သိန်းထက်ပိုပြီးဘာဖြစ်လို့မပေးတာလဲ “ လို့မေးတဲ့သူမျိုး။ ဘယ်လောက်ရှာရှာ၊ အကောင်းမမြင်၊ ဒီထက်တိုးပြီးမရှာရကောင်းလားဆိုပြီး ပူညံပူညံလုပ်၊ ယောကျာ်းဖြစ်သူကို ကျွဲလို၊ နွားလိုခိုင်းတတ်တဲ့ မိန်းမမျိုး ......။ ဥပမာပေးရရင်၊ ဘုရားဟော ဘူရိဒတ်ဇာတ်တော်ထဲက အလမ္ပယ်ဆရာပုဏ္ဍားကြီးရဲ့ မိန်းမလို လင်သာ ခါးကုန်းပြီး၊ ခေါင်းမွှေးပြောင်သွားမယ်၊ သူကတော့အလိုမပြည့်နိုင်တဲ့မိန်းမမျိုး ကို အလိုကြီးတဲ့မိန်းမ လို့ခေါ်တယ်။
( ၂ ) လျှပ်ပေါ်လော်လီတဲ့ မိန်းမ
ရှေးခေတ်က ဆရာကြီးတွေရေးသားထားတဲ့ မိန်းမတွေအကြောင်းထဲက တစ်ခု။ လျှပ်ပေါ်လော်လီတယ်ဆိုတာ ကြည့်ကောင်းအောင်ရေးတာ။ အခုခေတ်စကားနဲ့ ခပ်ရိုင်းရိုင်း၊ ဒဲ့တွယ်ရင်တော့ နန့်လွန်းတဲ့မိန်းမပေါ့။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တွေနဲ့ လိုတာထက်ပိုပြီးရောရောနှောနှောနေတတ်တဲ့သူမျိုး။ တစ်ခုရှိတာက Socialized ဆိုတဲ့ ( ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းတာ၊ ပွင့်လင်းတာ ) နဲ့မတူဘူး။ Social ကျတဲ့သူတွေက ရောတယ်၊ ပျော်ပျော်ပါးပါးနေတယ်၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် အကန့်တွေခွဲထားတယ်။ လျှပ်ပေါ်လော်လီတဲ့သူတွေ ( Slut ) တွေကျတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူး။ Single ဘဝတုန်းကလည်း ယောကျာ်းလေးတကာနဲ့ဖင်ပုတ်ခေါင်းပုတ်နေတယ်၊ RS ဖြစ်ပြန်တော့လည်း သူငယ်ချင်းများလို့၊ အခင်အမင်ပျက်မှာစိုးလို့ဆိုပြီး လူတစ်ကာနဲ့ရောတယ် ( ယောကျ်ားလေးတွေအပါအဝင် )၊ အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့အစောပိုင်းကာလ အဲ့ဒီအကျင့်ကြီးပျောက်သလိုလိုရှိသွားပေမယ့်၊ နောက်ကျတော့ဒုံရင်းက ဒုံရင်းဖြစ်နေတဲ့ မိန်းမတွေကို အပေါ်ကခေါင်းစဉ်အတိုင်းပဲခေါ်ပါတယ်။ ဥပမာက အဝေးကြီးပြစရာမလိုဘူး။ TV ကနေလာနေတဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာ အဲဒီလိုမိန်းမတွေရိုက်သတ်လို့မကုန်နိုင်မခမ်းနိုင်။
( ၃ ) သူခိုးကိုဓားရိုးကမ်းတဲ့မိန်းမ
ဘုရားဟောဇာတ်တော်ထဲမှာပါတဲ့နောက်ထပ်မိန်းမတစ်မျိုးပါ။ အိမ်တစ်အိမ်ကို သူခိုးဝင်ခိုးတော့ သူခိုးနဲ့အိမ်ရှင်နဲ့နှစ်ယောက်သတ်ကြရော။ အိမ်ရှင်ယောကျ်ားက သူ့အမျိုးသမီးကို သူခိုးကိုသတ်ဖို့ဓားလှမ်းတောင်းတယ်။ မိန်းမဖြစ်သူက သူခိုးကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်မိလို့၊ ဓားကိုယောကျာ်းကိုမပေးပဲ သူခိုးကို ပေးလိုက်တယ်။ ပြောရရင် သူခိုး နဲ့ အမျိုးသမီးပေါင်းပြီး အိမ်ရှင်ယောကျာ်းကို ဂျင်းထည့်လိုက်တဲ့ဇာတ်တော်ကြီးပေါ့။ အပြင်မှာလည်း အဲဒီလိုလူမျိုးတွေမရှိဘူးလို့ပြောနိုင်မလား ? အိမ်ထောင်သက်တမ်း လေးငါးဆယ်နှစ်အကြာမှ အမျိုးသားနဲ့ကလေးတွေထားခဲ့ပြီး နောက်ယောကျာ်းနဲ့လိုက်ပြေးသွားတဲ့မိန်းမမျိုး၊ လက်ရှိယောကျာ်းရှိရက်နဲ့ ခပ်တည်တည်ပဲ နောက်အိမ်ထောင်ပြုတဲ့ မိန်းမမျိုး၊ လက်ရှိယောကျာ်းက ကွာရှင်းမပေးလို့၊ အဟန့်အတားတစ်ခုလိုဖြစ်နေလို့ နောက်လူနဲ့ပေါင်းပြီး ယောကျာ်းဖြစ်သူကို လုပ်ကြံလိုက်တဲ့ မိန်းမမျိုး၊ ယောကျာ်းကြီး ငုတ်တုတ်ရှိရက်နဲ့ နောက်တစ်ယောက်ကို အိမ်ဦးခန်းခေါ်တင်ထားတဲ့မိန်းမမျိုးတွေအထိ အများကြီးရှိတယ်။ ဥပမာပေးရရင်တော့ ဟောလီးဝုဒ် မင်းသားကြီး တွမ်ခရုဇ် ရဲ့လေဒီ ကေတီဟုမ်းစ် က သူ့ဘော်ဒီဂါတ်ကို အိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ပြီး ပေါ်တင်တွဲပြတဲ့ ဇာတ်လမ်းလိုမျိုးပေါ့။ အဲဒါတွေလည်း ကြုံဖူး၊ ဖတ်ဖူးကြမယ်ထင်ပါရဲ့။
မိန်းမတိုင်း အဲဒီလိုလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေရှိသလို၊ ကိုယ့်သိက္ခာနဲ့ကိုယ်၊ တစ်ယောက်တည်းရပ်တည်၊ နေထိုင်ပြီး ဘဝကိုအဆင့်အတန်းမြင့်မြင့်ဖြတ်သန်းနေတဲ့၊ ထက်မြက်တဲ့ မိန်းမတွေလည်းတစ်ပုံကြီး။
နောက်တစ်ခုရှိတာက အမျိုးသားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း အိမ်ထောင်ကျလာပြီဆိုရင်၊ ဘဝတစ်ခုထူထောင်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကိုတိုင်ကလည်း မှန်ကန်အောင်နေဖို့၊ တာဝန်ကျေဖို့၊ တာဝန်ယူနိုင်ဖို့အရမ်းကြီးအရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်က ဘာအဖြစ်မှမရှိ၊ အရက်ကလေးမော့လိုက်၊ ဆေးလိပ်လေးဖွာလိုက်၊ ဂိမ်းလေးဆော့လိုက်လုပ်နေပြီး အမရာ လို၊ သမ္ဗူလ လို၊ မဒီဒေဝီ လိုတော်ဝင်မိန်းမမျိုးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် ရွှေတိဂုံဘုရားမှာသာ လက်အုပ်ချီပြီးဆုတောင်းလိုက်ပါလို့။
ဆဲမယ်ဆိုမဖတ်ရ၊ ဖတ်မယ်ဆိုမဆဲရ။ ကြိုပြောထားတာ။
( ဖော်ပြပါ ဆောင်းပါးအတွင်းပါဝင်သောဓာတ်ပုံများကို Google Search Engine မှရယူထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်စုံတစ်ရာအတွက် သက်ဆိုင်ရာကာယကံရှင်များကိုလည်း we.com.mm မှ credit ပေးပါသည်။ )
သင်္ချိုင်းဘေးမှာတည်ရှိတဲ့ Clown မိုတယ် သို့မဟုတ် အမေရိကရဲ့ခြောက်ခြားဖွယ်အကောင်းဆုံးမိုတယ်
6 months ago by yarzar